Kiraro fiarovana - Fomba 8 miaro anao
1. Miaro amin'ny zavatra mianjera sy manidina Rehefa mitondra fitaovana mavesatra ny mpiasa na miasa amin'ny tontolo mavitrika izay olona maro, milina sy fiara no miasa indray mandeha, loza mitatao matetika ny zavatra mianjera sy manidina. Ny kiraro miaro toy ny baoty vy dia afaka misoroka tsara ny fandringanana inj ...
Karazana kiraro fanatanjahan-tena
Ny kiraro fanatanjahan-tena dia mety tsy mitovy amin'ny famolavolana, ara-nofo ary ny lanjany. Ny fihazakazahana, ny fiofanana ary ny kiraro mandeha, ao anatin'izany ny kiraro ho an'ny fitsangantsanganana, jogging, ary fanaovana spaoro an-tongotra. Kiraro fanatanjahan-tena any an-kianja, ao anatin'izany ny kiraro ho an'ny tennis, basikety ary volley. Ny ankabeazan'ny fanatanjahantena amin'ny fitsarana dia mitaky ny vatana hiroso, mihemotra ary amin'ny lafiny ...
Ahoana no hividianana kiraro fiarovana
Rehefa mividy kiraro na kiraro fiarovana dia ny zavatra voalohany tsy tokony ho adino dia ny tsy ny kiraro rehetra no mitovy habe. Betsaka ny olona mikiry ka tsy hanao afa-tsy habe iray ary tsy misy fomba mety hahamety ny tongony akory ny habeny hafa. Samy hafa ny haben'ny mpamokatra sy ny kirarony amin'ny f ...
Kiraro fiarovana miaraka amin'ny ranjo vy, Kiraro fiarovana diabeta vy, Kiraro fiarovana Steel Cap, Steel Toe Cap Ho an'ny kiraro fiarovana, Kiraro fiarovana vy Brahma Steel, Kiraro fiarovana ho an'ny lehilahy,